कुखुराको भालेले ठुंगेर एक महिलाकाे ज्यान गयो ! - Lokpath Lokpath
२१ भाद्र २०७६, शनिबार १८:२८
कुखुराको भालेले ठुंगेर एक महिलाकाे ज्यान गयो !
प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०७६, शनिबार १८:२८
एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा एक महिलाले कुखुराको भालेले ठुंगेर ज्यान गएको छ । कुखुराको ठुङ्गाईबाट ७० कटेकी ती महिलाको मृत्यु भएको घटनाबाट प्याथोलोजिष्टहरु पनि आश्चर्यमा परेका थिए । त्यसैले सत्यतथ्य बुझ्न प्याथोलोजिष्टहरुको एउटा समूहले अनुसन्धाननै गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष अगष्टको अन्त्यतिर प्रकाशित ‘जर्नल फोरेन्सिक साइन्स’मा छापिएको छ ।
युनिभर्सिटी अफ एडेलेड र नेदरल्याण्डको फोरेन्सिक इन्टीच्युटका प्याथोलोजिष्ट संलग्न अनुसन्धानमा महिलाको मृत्युबारे भनिएको छ ,‘अष्ट्रेलियामा घरमा पालिएको एउटा कुखुराको भालेले एक महिलाको देव्रे खुट्टामा आक्रमण गरेको थियो । भालेको ठुङगाईले महिलामा अनियन्त्रित रक्तश्राव भएपछि उनको निधन भयो ।’
‘कुखुराको भालेले महिलाको खुट्टामा पहिलेदेखि सुन्निएको नसा (भ्यारिकोस भेन)मा ठुङ्ग्न पुगेको थियो । रक्तनली फुटेर अत्यधिक रक्तश्राव हुदाँ उनको मृत्यु भएको देखिन्छ ,’ अनुसन्धान पेपरमा लेखिएको छ ।
Tags: कुखुराको भाले
काठमाडौं । हामीलाई हावामा उडिरहेको बेलुन निकै राम्रो लाग्छ । तर यदि त्यहि
सूर्यको बारेमा अचम्मै लाग्ने केहि तथ्य !
काठमाडौं – सौर्य परिवारको एक मुख्य सदस्य तथा आकाशमा चम्किने विशाल तारा सूर्य
काठमाडौं । क्यानडामा एक कप्पलका साथ केहि अगाडि अचम्मको घटना भयो । कप्पलले
श्रीमतीको जन्मदिन बिर्सियो भने जानुपर्छ जेल, संसारका ५ अनौठा कानून
काठामाडौं । हाम्रो संसार अनेक विविधताले भरिपूर्ण छ । त्यसैले हामी जीवनमा बिभिन्न